झाक्रीको मुखमा थुक्ने मान्छे मानसिक रोगि थिए त ? हेर्नुस गाउलेहरु भन्छन कु-ट्नु गलत हो, अब के होला ? (भिडियो सहित) - नेपाली खोज
अहिले झाक्री बिबादमा आएका छन् , उनले एक मानसिक रोगि युवालाइ कुटपिट गरेको भन्दै उनलाई गिरफ्तार गरिएको छ। ति युवा मानसिक रोगि थिए त ? गाउलेहरुले बताए पुरा नालीबेली हेर्नुस ।
काभ्रेका कुल सङ्क्रमितमध्ये ४१ प्रतिशत एउटै अस्पतालमा